ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုထင်ကျော် "တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်နေမှုများ" ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် (ရုပ်သံ)
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုထင်ကျော် "တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို စိန်ခေါ်နေမှုများ" ခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:25 AM
အော် မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ဥပေက္ခာမပြုနိုင်တဲ့ ကိုထင်ကျော် တို့ ရှိသေးတာဘဲ-ကျန်လူတွေကတော့ ပြည်တွင်းရောက် N G O တွေနဲ့ပလဲပနံသင့်နေကြ- ဂီတာဖြေဖျော်ပွဲတွေ -ခေတ်ပျက်သူဌေးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့ မရှိဆင်းရဲသားအရေး မကြည့်အားဘူး- အော်-သနားစရာ နိုင်ငံရေးပါတီတေါပါလား-
အင်း .. ကိုထင်ကျော်လိုလူမျိုးရှိသေးတာပဲ
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၁၇-၂၀၁၃) posts at boburmese.blogspot.com
Hi,,it is nice to see political activists who stand up for poor ordinary people...but for the monks, I dont think they should show up every single game or else the value that we keep for them will drop down slowly. And finally they will be nothing different with ordinary layman..Any way, this is my point of view...
ဟိုအကြောင်းပြချက် ဒီ အ ကြောင်းပြချက် တွေနဲ့ ဆန္ဒပြ
အော်ဟစ် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ပြီး နာမည်ကြီးချင် တဲ့ ကောင်။
သူနာမည်ကြီးဖို့ နိုင် ငံရေးလုပ်စားဂွင် ဖန်တဲ့ ကောင် မျိုး။
တကယ်လက်တွေ့ တစက်မှ မလုပ်ပဲ ထ ဟောင်ပြီး ဂွင် ဖန်တဲ့ ကောင် စေတနာ မမှန် တော့ လက်သီးနဲ့ အထိုးခံ ရ
နောက်ဆို အသတ်ခံ ရ မယ်
နိုင်. ၂. မရှိပဲမှတ်ပုံတင်ကိုင်နေကျသူများသာဖြစ်ပါတယ် သူတို့ကနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့အတွက်
သိမ်းယူခွင့်ရှိပါတယ် လူတွေကိုတော့ဖမ်းဆီးပြီးထောင်ချရပါမည် အဲ့ဒါကိုအစိုးရမှအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်
လ ဝ က နဲ့ ဦးခင်ညွန့်ရဲ့တပည့်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေပဲ